रङ्गशाला निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई ३५ करोड – Himal eNews
चितवन, माघ २७ । यहाँ निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सहयोगार्थ आयोजना गरिएको धनधान्याचल महोत्सवमा हालसम्म नगद र बोलकबोल गरी रु. ३५ करोड बढी सङ्कलन भएको छ ।महायज्ञ मूल आयोजक समितिका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीका अनुसार आज अन्तिम दिन थप रु. २० करोड सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै महायज्ञबाट रङ्गशालालाई रु. ५५ करोड सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको अगुवाईमा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ । रङ्गशाला निर्माण गर्न करिब रु. दुई अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ । जनस्तरबाट निर्माण हुन लागेको देशकै यो पहिलो रङ्गशाला हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकोे केन्द्रीय क्याम्पस परिसर : जहाँ बन्दैछ कोरोनाविरुद्ध लड्ने हतियार
आज काठमाडौंका यी स्थानमा ५ घण्टा बत्ति काटिने
चिट चोर्न नदिएको भन्दै आरआर क्याम्पसमा परीक्षार्थीले कुटे शिक्षक